Madaxwaynaha Koonfur Galbeed muxuu ka yiri mowshinka Baydhabo? – Radio Daljir
Oktoobar 5, 2017 2:27 g 0
Madaxwaynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ka hadlay mowshin la sheegay xildhibaano katirsan Koonfur Galbeed inay ka wadaan magaalada Baydhabo, kaasi oo ay xilka uga qaadayaan.
Hadal uu maanta warbaahinta kusiiyay magaalada Baydhabo ayuu ku sheegay inay jiraan dad doonaya inay dumiyaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isagoona shacabkiisa u diray fariin ku’aadan inay kasoo horjeestaan.
“Reer Koofur Galbeed Federaal ayaa tihiin, Soomaaliya Federaal ayay qaadatay, waxaa la rabaa inaan labo gacmood ku qabsatiin, dad ayaa ku fikiraya in Federaalka la baabi’iyo maamulada la dumiyo”ayuu yiri Shariif Xasan.
Tan iyo markii ay qaraxday xiisadda siyaasadeed ee dowladdaha Khaliijka ayaa waxaa ay saamayn ku yeelatay siyaasadda Soomaaliya, kadib markii dowlad goboleedyada ay diideen mowqifka dhexdhexaadnimo ee ay qaadatay dowladda dhexe ee Soomaaliya.